The Ten Dollar Boll
Royalti Tak Bayar, Kebas Pula Minyak Kelantan Didaratkan Di Terengganu
PRU in June 2013
နိုင်ငံရေး ဓါတ်စာ ရိုဟင်ဂျာ
ကျွန်တော်သာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် (၁)
Dua Pengurus FELDA Meninggal Dunia
This is the author's cat. This cat is not dead
he muses about his mortality, statistician Prof David Spiegelhalter
wonders if he is destined to live longer than his 20-year-old cat.
Our cat is old. Old, deaf andabit daft. But, as I steadily head
Posted: 07 Sep 2012 07:45 AM PDT
After years of tolerating marriage to an alcoholic husband, I finally reached the painful decision that the only way for my two young children and me to survive was to getadivorce. It wasn't something I wanted to do, but it had to be done.
However, even after the divorce, problems with my ex-husband continued, and I realized I had no choice but to leave town. Once again, I didn't really want to, because I liked my house and the neighborhood, but I had to do what was necessary.
I foundareal estate agent, listed my house for sale and made arrangements to transfer my insurance sales job to Seattle, fourteen hundred miles away. Then I sat back and waited for something to happen. And waited. And waited. Nothing happened for months on end. I changed real estate agents twice, but still there were no serious buyers in sight. And I couldn't afford to leave town until I sold my house.
The stress of the divorce and the subsequent living in limbo was almost too much for me. I had difficulty sleeping. In fact, the only place I could sleep turned out to be church. I'd go there every week and sink wearily into the third or fourth pew. I was all right through the early part of the service when we sang hymns, passed the collection plate and listened to the sermon for the children. But by the time the main sermon started, I would nod off and not wake up until it was over.
I guessed that Reverend McKinley, the minister, had noticed my somnolence because one day he announced that the title of his sermon was "On Sleeping in Church." I don't have any idea what was actually in that sermon because, as usual, I slept soundly through the whole thing. I apologized to the minister that day after church. He took my hand and shook it warmly. "Don't worry about it," he said. "Obviously this is where you're supposed to be."
"You can have this," he told the children, who were sitting attentively, clutching their one-dollar bills. "But in order to take this, you have to let go of what you already have." He held the ten-dollar bill out at arm's length.
At least that little demonstration kept me awake forawhile, before I resumed my customary slumbers. I didn't even hear what the minister said to the children after that.
But that night in bed, as I tried to go to sleep, suddenly, the penny dropped. My eyes opened, and as I stared up in the darkness, I knew exactly what I had been doing wrong - I was clinging on with my little fist toapuny, tattered one-dollar bill! Of course my house hadn't sold. I was still so attached to it.
I was so accustomed to moving in the same groove, day in, day out, through each room, attached to the placement of everything likeaprisoner who has come to love the familiarity of his own jail cell. In short, I had loved my house too much. And I also realized in the same moment that I wasn't confident enough thata"ten-dollar bill" was out there for me in Seattle. I couldn't see it, I couldn't taste it, I couldn't touch it. As far as I was concerned, moving out there wasaleap in the dark, and I was scared of it.
Letting go of my "one" set me onapath that allowed me to followalong-postponed dream of becomingawriter. It also led toanew husband, three more children and eventually three grandchildren. My "ten" includes countless blessings that I never could have imagined in my old life, but before I could have any of them, I had to open my hand and release everything I was holding on to.
And yes, my "ten" also includes staying awake during sermons.
Posted: 07 Sep 2012 07:12 AM PDT
She gazed at her son's body as she spoke to the nurse.
"It was Jimmy's idea to give his body to the university for study. He said it might help somebody else, and that is what he wanted. I said, no at first, but Jimmy said, 'Mom I won't be using it after I die, maybe it will help some other little boy to be able to spend one more day with his mother'. My Jimmy hadaheart of gold, always thinking of someone else and always wanting to help others if he could".
The Angels are so friendly, and I love to watch them fly. Jesus doesn't look like any of the pictures I saw of Him, but I knew it was Him as soon as I saw Him. Jesus took me to see GOD! And guess what mom? I got to sit on GOD'S knee and talk to Him like I was somebody important. I told GOD that I wanted to write youaletter and tell you good-bye and everything, but I knew that wasn't allowed. God handed me some paper and His own personal pen to write you this letter with. I think Gabriel is the name of the angel that is going to drop this letter off to you. God said for me to give you the answer to one of the questions you asked Him about... "Where was He when I needed him?"
God said, "The same place He as He always is with all His children." Oh, by the way Mom, nobody else can see what is written on this paper but you. To everyone else, it looks likeablank piece of paper.
Posted: 07 Sep 2012 10:03 AM PDT
"Walaupun ia lebih dekat dengan negeri Kelantan, paip sebesar 15 inci dipasang untuk mendaratkan gas tersebut di pelantar di Kemaman, sekali lagi Kelantan terlepas," kata Exco Kanan Kerajaan Kelantan, Datuk Husam Musa.
"Kita berharap Perdana Menteri memberi jawaban sama ada menolak tuntutan itu atau mempertimbangkannya," kata Husam.
Posted: 07 Sep 2012 06:33 AM PDT
PAS menyifatkan, tindakan sesetengah pihak bertindak biadab sekarang adalah kerana diajar oleh Umno.
AJK PAS Pusat, Ustaz Idris Ahmad (gambar) berkata, Pemimpin Umno lupa, budaya ini dimulai oleh pemimpin Umno dan merekalah gurunya.
Posted: 07 Sep 2012 03:34 AM PDT
K etua Penerangan Parti Keadilan Rakyat (PKR) Selangor Shuhaimi Shafiei berkata, tiada isu yang timbul apabila pemain bolasepak negara, Safee Sali yang menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri anjuran Adun Batu Tiga, Rodziah Ismail baru-baru ini.
"Ini perkara biasa. Kita biasa menjemput pemain-pemain bolasepak untuk turut sama menghadiri program anjuran PKR. Maka, dalam kes Safee ini juga adalah tidak berkecuali.
"Jika benar sekalipun Safee menyokong PKR, itu adalah hak beliau. Malah, sudah ramai atlit negara yang menyatakan sokongan kepada parti politik tertentu. Terbaru, atlit skuasy negara, Azlan Iskandar menyertai Umno. Jadi tiada apa yang mahu dihairankan", katanya ketika dihubungi FMT hari ini.
Apabila ditanya adakah Safee menyokong PKR, Khalid menjawab, "itu kena tanya dia sendiri."
Posted: 07 Sep 2012 12:17 AM PDT
Posted: 07 Sep 2012 12:51 AM PDT
Memang mengerikan! Walaupun penulis bukan kaki Youtube, tetapi video ini telah menarik minat penulis untuk mengetahui apakah yang telah membuatkan ia ditonton sehingga melebihi 2.8 juta tontonan.
Pada awalnya, ia sekadar menunjukkan kereta jenis Toyota Camry berpusing melawan arah jalan lalu terbalik.
Namun tak sangka pula ia telah menyebabkan penumpang di dalamnya tercampak keluar malah ada yang terhumban tinggi kehingga 10 kaki!
Lebih memeranjatkan, video itu turut merakamkan sebelah kaki kepada salah seorang daripada nahas jalan raya itu terpelanting jauh.
Dikhabarkan kemalangan yang berlaku pada sekitar June 2012 telah mengorbankan empat orang penumpang yang berada di dalam kenderaan berkenaan.
Tidak tahulah apa puncanya ia berlaku sedemikian rupa.
Tapi bila penulis tengok kepada keadaan tayar kereta itu ia nampak seperti dipandu laju. Tidak pasti pula sebab penulis tidak arif tentang kereta.
Apa yang penulis nasihatkan semasa memandu sila mengikut had laju yang telah ditetapkan dan patuhi undang-undang.
Saksikan video ini untuk pengajaran kita semua. -mynewshub
HMO: Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. (al-Baqarah: 195)
Posted: 06 Sep 2012 09:21 PM PDT
Earlier predictions were made for June, then July and August. Nothing happened.The opposition, especially, enjoys simulating the general election as they resolute on strong campaigns and political propaganda since last year.
The ruling party, on the other hand, relies on Prime Minister Datuk Seri Najib's 'inspiration' in deciding the perfect timing.
While he had announced Sept 28 as Budget Day, indications now point to November. Taking into account the Budget needs about four weeks to pass through Dewan Rakyat and Dewan Negara, he can only dissolve the the Parliament (after getting consent from His Majesty the Yang di-Pertuan Agong) sometimes by end October or early November.
But it also depends on sentiments and the Parliament. There were times when the Budget took six weeks to pass through both chambers, forcing the session to be extended.
Let's say the Parliament is dissolved by end of October. Going by the Constitution, elections must be called within 60 days.
It will not be that 'proper' to have it in November. The Election Commission needs aboutamonth to make preparations. The Opposition is against it, especially PAS over its worries for the hajj season which will see at least 200,000 voters out of the scene.
November will also see the schools being used for SPM, SPVM and STPM examinations. As schools are the usual spots for polling, December is seen suitable - those performing the hajj have returned, school holidays have just started and the EC is fully-prepared.
But still, it will be monsoon. How are we going to prepare foramonsoon elections when some low areas are under water? Flood brings chaos and the government will have to attend to those affected first.
So, looks very unlikely.
Monsoon will go on until end January. Schools will be re-open and there will be no space to call for national poll.
Perhaps we can consider another factor here.
Just let the government completes its mandate until April. Its the mandate given by the voters, so there's nothing wrong with it.
When is the first session of the Parliament? March of April? As general elections are usually called after the dissolution of the first session of the Parliament, say by end of April, we can also go to the poll sometimes in early June.
Source: နိုင်ငံရေး ဓါတ်စာ ရိုဟင်ဂျာ By ဌေးလွင်ဦး
လူတစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ အုပ်စုတစ်စု ဟာ သူရှင်သန်ဘို့၊ သူတို့ အင်အားထွားဘို့ သူတို့ သြဇာကြီးဘို့- ဓါတ်စာ ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့လူ၊ အပြစ်ကင်းမှုကို လိုလားတဲ့ အုပ်စုနဲ့ အမှန် တရား ကိုမြတ်နိုးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတို့က- အနာဂါတ်မျိုးဆက်နဲ့ ရေရှည်ကိုသာ ကြည့်ပြီး အမှန်တရားပေါ်မှာ ရပ်တည်ကာ- လူသားများအကြား အနစ်နာခံ တရားမျှတတဲ့ ဓါတ်စာကိုသာ မှီဝဲလေ့ရှိပြီး-။ ဘယ်သူ သေသေ ငတေမာ ပြီးရော ဆိုတဲ့ လူ၊ အာဏာမက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခု ကွဲပြဲသွားအောင် ဖန်တီးချင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများက ငါတို့ ဖြစ်ချင်တာ လုပ်နိုင်ဘို့ လိုတယ်- ဘာဖြစ်ဖြစ် လုပ်မှာပဲ ဆိုပြီး လိမ်ညာကောက်ကျစ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျတတ်တဲ့ ဓါတ်စာများကို သုံးပြီး အင်အားထွားကြိုင်းအောင် ပြုမူဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပါတယ်။မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက်- အာဏာမက်တဲ့ အုပ်စုများက- မွတ်ဆလင်ကို ဓါတ်စာ နိုင်ငံရေး ဓါတ်စာ အဖြစ် နှစ် ပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ကို အမြင်စောင်း အထင်လွဲနေအောင် ရာစုနှစ်ဝက် ကျော် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ပနက်ရိုက်ထားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနေ မွတ်ဆလင်ထဲမှာမှ- လူများစု ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာများကို မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရယူစဉ်ကပဲ တရားဝင်တိုင်းရင်းသား အဖြစ် သတ် မှတ်ထားခဲ့ရာက အထူးမုန်း လူတန်းစား နိုင်ငံရေး ဓါတ်စာ အဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဓါတ်စာကို အကွက်ရရင် ရသလို၊ နိုင်ငံရေးမှာ သုံးနေခဲ့တာလည်း အကြိမ်ကြိမ်အလီလီပါ။ နိုင်ငံရေး အကြပ် အတည်း ဖြစ်လာတိုင်း- မွတ်ဆလင်ကို ကုလားဆိုင်း ဘုတ်တပ်ပြီး- ကုလား၊ ဗမာ အဓိကရုန်း ဖန်တီးခဲ့တာ လည်း အဖန်တရာ ကျေနေပါပြီ။
ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ လမ်းစဉ်ကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်လို့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အော်ဟစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး သမား ဆိုသူများ ကလည်း တစ်ကယ်တော့-၊ မိမိသာ အာဏာရမယ်ဆိုရင် ဗိုလ်နေ၀င်းဆီမှာ တပည့်ခံရခံရ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်များ က ဘွားကနဲ့ ပေါ်လာပြီး- ရိုဟင်ဂျာ ကို နိုင်ငံရေး ဓါတ်စာ အဖြစ် ဆက်လက်မှီဝဲ ကောင်းနေဆဲပါ။
စစ်အစိုးရအောက်မှာ တစ်သက်လုံး စကားတစ်လုံးမှ မဟ နိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံက ခွဲထွက်လိုတဲ့ ရခိုင်ခွဲထွက်ရေး သောင်းကျန်းသူများက- သူတို့အနေနဲ့ ရခိုင်နယ်ထဲမှာ တရားဝင် လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရဘို့-၊ တရားဝင် လက်နက်ကိုင် လူစုနိုင်ဘို့- အကွက်ချောင်းနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အကွက်မရတော့ အကွက်ကို ဖန်တီးပြီး- ရိုဟင် ဂျာ ဓါတ်စာကို စတင်သုံးခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး အာဏာကို မက်မောကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကလည်း- ဗိုလ်နေ၀င်း စီမံပြီး မြေသြဇာအတိုင်း လူထု ထောက်ခံမှု ရလေမလားလို့- ချက်ချင်းလက်ငင်း ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ရေး ဟစ်ကြွေးပြီး- ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ နိုင်ငံ ရေး ဓါတ်စာကို မြိန်ရေယှက်ရေ သုံးစွဲလိုက်ပြန်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး ၀န်ဆောင်တွေကြားမှာ မလှုပ်သာ၊ မလှုးသာ ဖြစ်ရတာ လား၊ ခွဲထွက်လိုသူတွေကို ဓါတ်စာချကျွေးလိုက်ပြီး စစ်တပ်သြဇာ ဖြန့်ကျက်လိုလို့ ဖြစ်လာမှာကို သိနေလျှက် မသိပြုလိုက်တာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး- နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံရေး ဓါတ်စာ အဖြစ် အသုံးပြုလိုက်တာတော့- ကမ္ဘာက သိသွားပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးကို ဦးဆောင်ဦးရွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ် တိုင်လည်း- လူများစု အထင်လွဲပြီး လူထုထောက်ခံမှု လျှော့ပါးသွားမှာကို စိုးလို့ ထင်ပါရဲ့- ရိုဟင်ဂျာ မုန်းတီးရေး ဓါတ်စာကိုပဲ ကြိတ်မှိတ်မြိုချ လိုက်ပြန်ပါတယ်။
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကေအင်ယူ အတွင်းရေးမှုးကိုယ်တိုင်သည်ပင်- ဘာဗဟုသုတမှ မရှိဘဲ-၊ ရိုဟင်ဂျာ ဆန့် ကျင်ရေး ဓါတ်စာကို သုံးဆောင်လိုက်ပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံး မေတ္တာတရား ရင်ဝယ်ထားပါတယ်လို့ ရင့်ကျူးနေတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်တွေ ကိုယ်တိုင်က သူတို့ကို မဲရွေးချယ်ခွင့် မဲပေးပိုင်ခွင့် မပေးထားတာကို တောင်းဆိုဘို့ ရိုဟင်ဂျာ မောင်းထုတ် ဆိုတဲ့ ဓါတ်စာကို မှီဝဲပြီး နိုင်ငံရေး အာဏာ တောင်းဆိုပါတော့တယ်။ ဒါကို နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလို့ ခံယူထားတဲ့ သင်္ကန်းဝတ် ၀ီရသူက ဦးဆောင်ပြီး မန္တလေးမြို့မှာ စတင်လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။
ပညာမဲ့ တစ်စောက်ကန်း ရခိုင်မျိုးချစ်များက သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို မအောင့်နိုင် မထိမ်းနိုင်ဘဲ- ရခိုင်ကို ကာ ကွယ်ဘို့ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ခွင့်ပေးပါ၊ လက်နက်ကိုင်ခွင့်ပေးပါလို့ လူသိရှင်ကြား တောင်းဆိုသလို- ဘုန်းကြီးများက လည်း သူတို့အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဓါတ်စာကို သုံးပြီး ဆန္ဒပြရတာဟာ- "အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်လက်ဆင်နွှဲ ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မန္တလေး မဟာမုနိ ဘုရားကြီးတိုက်က ဆရာတော် ဦးကောမလက RFA ကို ခုလို မိန့်ကြား ပါတယ်။
"ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဦးပဉ္စင်းတို့ သံဃာထုဟာ မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ တစ်ခုခု လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဘေးဖယ်ခြင်း ခံရမှုက မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာထက်ကြီးတဲ့ အရပ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒါမျိုး ဖယ်ကြဉ်ခံရတာဟာ မလုပ်ကောင်းဘူး ဆိုတာကို သိဖို့အတွက် ဦးပဉ္စင်းတို့က ထိုက်သင့်တဲ့ စည်းရုံးမှုနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ လုပ်အားကို ပြဖို့လာတာ"(၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ ၅ ရက် အာအာက်ဖ်အေ)။
လို့ သင်္ကန်းပြပြီး လူထုကို လှည့်စားကာ နိုင်ငံရေးအာဏာကို စွက်ဖက်ဘို့ (မဲ ခွဲတမ်းတောင်းဘို့) ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်တင်ပဲ ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီအချက်တွေကို စုလိုက်ရင် အာဏာရူးများအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်များကို နိုင်ငံရေး ဓါတ်စာ အဖြစ် အသုံးပြုပြီး မြန်မာလူထုကို လှည့်စားကာ အာဏာလုနေကြောင်း- ထင်ရှားလှပါတော့တယ်။
Posted: 06 Sep 2012 09:07 PM PDT
ဦးကိုယ်တိုင်က အညတရ နိုင်ငံရေး ခရီးသည်ဘ၀အစ ၁၉၆၂-ခုနှစ်၊ သတ္တမတန်း ကျောင်းသားဘ၀မှာ ပုသိမ်ဥပစာကောလိပ်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုနေ၀င်းစံ၊ မမိမိစံ၊ ကိုလှိုင်ဘွားနဲ့ အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းသိန်းကောလိပ်က ခေါင်းဆောင် ကိုဖြူတို့နောက်က ကလေးပီပီ ထုံးပုံးနဲ့ တံမြက်စည်းတံကိုကိုင်ပြီး၊ ""ကျောင်းတိုင်းဖွင့်ရမည်၊ ပန်းတိုင်းပွင့်ရမည်"" ""ဒို့ကျောင်းသားသွေးနဲ့ ရေးတဲ့ဥပဒေ ဒို့အလိုမရှိ"" ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို ကတ္တရာလမ်း မှာရေးရင်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူပါ။ ဦးရဲ့သားကလေးဟာလည်း ဒီလိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပဲ မင်းတို့လက်ထဲကို ရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်လား။ ဒါတွေကို ရေးပြနေရတာက ဦးရှေ့ဆက်ပြောမဲ့ အကြောင်းတရားတွေဟာ မလိမ်၊ မညာ၊ မကွယ်၊ မ၀ှက်ဘဲ ရိုးဖြောင့်တဲ့ခွပ်ဒေါင်းသစ္စာနဲ့ ပြောနေကြောင်း ငါ့တူသိစေချင်လို့ပါ။
၈၈-အရေးအခင်းရယ်လို့ စစချင်း ဘုန်းမော်ကိစ္စအလွန် မတ်လမှာ ဦးအဖမ်းခံရတယ်။ ဇွန်လမှာ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုကြလို့ ဇူလိုင်လမှာ ဦးတို့ပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်။ ထောင်ထဲက ပါလာတဲ့ဒဏ်ရာ တွေကို ဆေးကုနေတဲ့ကြားက ၈ လေးလုံးဆိုပြီး ရက်ချိန်းပေး လိုက်တော့ ""မြန်မာမွတ်စလင် သပိတ်ကော်မတီ""ကို ၀မ်းအိုဝမ်း ဦးကျော်ဝင်းမောင်၊ ဦးထွန်းကြည်(ကွယ်လွန်)၊ ကိုဌေးလှိုင်(ကွယ်လွန်)တို့နဲ့ အတူ ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းပြီး S.C.S မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး သပိတ်စခန်းမှာ နေ့ရောညပါ တောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့ သူပါ။ ဒါလည်း အညတရဘ၀နဲ့ပါပဲ။
အကသ ကျောင်းသားလေးတွေဖြစ်တဲ့ မင်းဇင်၊ သက်ဝင်းအောင်၊ ရဲတေဇာ၊ ဗထူးအောင်၊ မောင်ဆန်း၊ ဇေယျကြီး(အင်းစိန်)၊ စိုးမိုး၊ ကျော်သူရ စတဲ့ကလေးတွေဟာ ဦးရဲ့သား ဇေယျာဝင်း ကို အကြောင်းပြုပြီး ဦးရဲ့အိမ်ကို စားအိမ်၊ သောက်အိမ်၊ ဆုံရပ်အဖြစ် သုံးခဲ့ကြတယ်။ ၈-လေးလုံးကို ဖြိုခွင်းပြီးစစ်အာဏာသိမ်းလိုက် တဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေတပ်ဖျောက်ခဲ့ကြပေမဲ့ ဒီကလေးတွေကတော့ ဦးတို့ မိသားစုနဲ့ တစ်သားတည်းရှိနေ ဆဲပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဦးရဲ့သား ဇေယျာဝင်းလည်း ထောင်ထဲကို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာ တော့ တော်တော် နှစ်ကြာသွားခဲ့တယ်။ ဒီအတောအတွင်း ငါ့တူလည်း ထောင်ထဲရောက်နေတုန်း အပြင်မှာ အဖေ ဆုံးသွားတာကအစ ဦးသိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၈၈ ရဲ့ရဲမာန်နဲ့သတ္တိဟာ ဓားတောင်ကိုကျော်ပြီး မီးပင်လယ်ကိုပင်ဖြတ်ရဲတယ်ဆိုတာကို ဦးအသေအချာ ယုံကြည်နေတဲ့အတွက် ငါ့တူတို့ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ထောက်ခံပြီးသားပါ။ ဦးရဲ့ဒီသဘောထားကို ငါ့တူတို့အထဲက ကိုဂျင်မီနဲ့ မနီလာသိန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ အသိဆုံးပါ။ ဒီနေ့ထိလည်း ၈၈ကို စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားသေးပါဘူး။
ကဲ-ပြောစရာရှိလာပြီဆိုတော့ ဦးပြောရတော့မယ်။ ကျောက်ထရံ၊ ကျောက်နီမော်စတဲ့ ရွာတွေဟာ အေဒီ ၇ ရာစုလောက်ကတည်းက ရှိနေတဲ့ရွာတွေဆိုတာ အထောက်အထား အခိုင်အမာရှိတယ်။ မူလက ဝေသာလီဟိန္ဒူတွေ၊ ဇာတ်မျိုးရိုးအရ ငါးဖမ်းတဲ့လူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ ၇ ရာစု ၈ ရာစုတွေမှာ သင်္ဘောပျက်အာရဗ်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာရော၊ အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ယုံကြည်မှုကူးပြောင်းတာ တွေကြောင့်ရော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ တဖြည်း ဖြည်း လူဦးရေတိုးပွားလာကြတယ်။ ငါ့တူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ထရံရွာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၈၀၀ လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ ပလီချေ(ပလီအသေး)နဲ့ နှစ် ၇၀၀ လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဗလီကြီးဆိုတာ အထင်အရှားရှိတယ်။ ငါ့တူတို့ မရောက်ခဲ့ဘူးထင်တယ်။ ကျောက်နီမော်ဆိုတာ မူလ ကျောက်ထရံရွာသားတွေ လာပြီး ပိုက်စခန်းချရာကနောက်ပိုင်းမှာ ရွာအတည်တကျ ဖြစ်လာတာ။ အဲဒီမှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀၀ လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ မကျီးတောဗလီဆိုတာ ရှိတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့စကားမှာ အာရဗီ၊ ဟင်ဒီ၊ အူရဒူ၊ ရခိုင်၊ ဘင်္ဂါလီ၊ အင်္ဂလိပ် စတဲ့ဘာသာ စကား တော်တော်များများရောနေတာ တွေ့ရမယ်။ ဒါက ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေ သုတေသနလုပ်ပြီးမှ အဖြေထုတ်နိုင်မဲ့ ကိစ္စပါ။ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုကို ပြောတိုင်း ဘင်္ဂါလီစကားပါလို့ လိုရာဆွဲပြောလို့မရဘူး။
လာတုန်းက နည်းနည်းလေး အခုအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ကောက်ချက်ချတာဟာ တော်တော် ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ ကောက်ချက်မျိုးလို့ ပြောချင်တယ်။ နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ လူတစ်စုမပြောနဲ့ လူတစ်ယောက်ကတောင် သားစဉ်မြေးဆက်ထူထောင်ရင် ရွာတစ်ရွာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သာမန်ဉာဏ်နဲ့တွေးကြည့်ရင်တောင် သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ နောက်ပြီး ငါးဖမ်းလှေထဲမှာ လူပိုတွေ ပါလားမပါလား ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့စကားက အခြေအနေမှန် ကို မသိဘူးဆိုတာ ၀န်ခံရာရောက်နေပါတယ်။ ကျောက်နီမော်က ပင်လယ်ကို ငါးဖမ်းထွက်မဲ့ စက်လှေတစ်စီးမှာပါတဲ့ လူအားလုံး (၁) ဓာတ်ပုံကိုကပ်ပြီး ပုံစံဖြည့်ရတယ် ပြီးတော့ (၂) ရယက (၃) လ-၀-က (ပိတ်ဆို့ရေး) (၄) စ-ရ-ဖ (၅) ရဲစခန်း (၆) ရေလုပ်ငန်းဦးစီး ဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက် အဆင့်ဆင့်ကို စရိတ်အကုန်ခံရယူပြီးမှ စက်လှေကိုပါစစ်ဆေးပြီး ပင်လယ်ကို ထွက်ခွင့်ရတယ်။ ပြန်ရောက်ရင်လည်း ကမ်းကိုမကပ်ခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့တွေ က လှေပေါ်အရောက် စစ်ဆေးပြီးမှ ကမ်းကပ်ခွင့်ရတာပါ။ ဒါတွေလုပ်လို့ ဘယ်လိုစရိတ်တွေ ကုန်နိုင်တယ်ဆိုတာ ငါ့တူ ခန့်မှန်းကြည့်ပေါ့။ ဒီလိုချုပ်ကိုင်မှုတွေကြားမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နေတဲ့ တံငါသည်တွေက ဘာအကြောင်းကြောင့် လူပိုတွေကို ခေါ်လာမှာလဲ။ ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလူတွေကရော ဒီလိုတံငါရွာကို ဘာမျှော်လင့်ချက်ရှိလို့ လာကြမှာလဲ။ ငါတူ စေ့စေ့တွေးကြည့်ပါ။ မ-ဆ-လ ခေတ်နဲ့ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ ဖွတ်ကျောပြာစုနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကို ဘယ်ဘင်္ဂါလီမှမလာဘူး။ ချမ်းသာတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေ ဆီကိုသာ သွားကြမှာပေါ့။ ဒါကိုသိတဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကတောင် နောက်ပိုင်းမှာ ၀င်လာတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါလို့ ပြောနေပြီလေ။
ဦးအနေနဲ့ ဒီစာကို ရေးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲ။ ငါ့တူရောက်ခဲ့တဲ့ ကျောက်နီမော်ရွာက မင်္ဂလာတောင်ပေါ်မှာ အုတ်ဂူဗိမာန်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီအုတ်ဂူဟာ ဦးရဲ့ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာဖြစ်သူ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမား သခင်ဇွာ ခေါ် ဆရာကြီးဦးနဇွာမွဒ္ဒင်ရဲ့အုတ်ဂူပါပဲ။ သူ့ကို အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သူတော်စင် တစ်ဦးလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သူဟာ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့နဲ့ ဂျပန်ခေတ်တွေမှာ ရွှေဘို၊ ကန့်ဘဘူ၊ ဘုံးအိုးစတဲ့ဒေသတွေမှာ ပညာသင်ရင်းနဲ့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၊ နယ်ချဲ့နဲ့ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်ရေးတွေကို ဆရာချယ်(နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ပထမဆင့်) (၁၉၉၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)၊ အခု အသက် ၉၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သခင်မင်းညို (ဗန်းမော်)၊ အာဇာနည်ဆရာကြီးဦးရာဇတ် စတဲ့ပုဂ်္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့အတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဂျပန်ခေတ် ဘုံးအိုးရွာသားတွေနဲ့ B.I.A တပ်ကြားမှာ သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ကိစ္စကို ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နဲ့အတူ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့သူပါ။ (သခင်တင်မြရဲ့ ဘုံဘ၀မှာဖြင့်ကိုကြည့်) ဒီဆရာကြီးဟာ လွတ်လပ်ရေးရအပြီးမှာ ရခိုင်ကိုပြန်လာပြီး ကျောက်နီမော်ရွာမှာ ""ဟေမာယတွလ် အစ္စလာမ်"" ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ့်အကျိုးဆောင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး တိုင်းတစ်ပါးသြဇာကင်းရေး၊ ဘာသာရေးအယူသီးမှုတွေ ပပျောက်ရေး၊ ဆင်းရဲသားများ ကောင်းစားရေး၊ အမျိုးသမီးများ ဘ၀မြှင့်တင်ရေး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးနဲ့အတူ ခေတ်ပညာကိုပါ သင်ယူရေး၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ရေးစတာတွေကို အမြော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်း သင်ကြား ပေးခဲ့တယ်။
ကျောက်နီမော်ရွာသား လူငယ်တချို့ကို သူအခြေစိုက်ရာ သံတွဲကိုခေါ်သွားပြီး ဘာသာရေးရော ခေတ်ပညာကျောင်းမှာပါ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလူငယ် တွေထဲက တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ရှေ့နေ စတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ရော ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူတွေပါ အမြောက်အမြား ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒီဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေ ဟာ ခုချိန်ထိ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံး နိုင်ငံအတော်များများကို ရောက်ရှိ ပြီး ပညာသင်ကြားနေကြတယ်။ ဦးကိုယ်တိုင်က တောင်ငူ၊ ပုသိမ်၊ သံတွဲ အဆက်ဆိုပေမဲ့ ဒီဆရာကြီးနဲ့ ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့လို့ သူ့အကြောင်း၊ သူ့ရွာ ကျောက်နီမော်အကြောင်းကို ၁၉၆၇ လောက်ကစပြီး ခုချိန်အထိ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်နယ်က အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အယူသီးသမား ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတချို့ကတော့ ဒီဆရာကြီးရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကို မိစ္ဆာအယူ အဆတွေဆိုပြီး လက်မခံကြဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ခုနောက်ပိုင်းမှာ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ခေတ်ပညာမတတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် မနေတတ်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချပြီး ပညာမျက်စိဖွင့် ပေးရမယ်လို့ ပြောတာကို ကျောက်နီမော်ရွာက ဒီဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေအနေနဲ့ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ အနှစ်နှစ်အလလက သူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ ပညာရေးပန်းတိုင် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ငါ့တူတို့ထူထောင်ချင်တဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးအနေနဲ့လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောချင်ပါတယ်။ ကျောက်နီမော်ကလူတွေဟာ ဘင်္ဂါလီ တွေမဟုတ်ဘူး။ ဝေသာလီအဆက်တွေလို့ ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ ငါ့တူပြောသလို သူတို့ကို ဘာကြောင့် ကမန်ထဲမှာ ထည့်ရတယ်ဆိုတာ အခုပြောမယ်။ အမှန်က ဒီလူတွေဟာ ကမန်တွေရဲ့ဘိုးအေ တွေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကမန်ဆိုတာ AD (၁၆)နဲ့ (၁၇)ရာစုကျမှ ရခိုင်ကိုရောက်တာ သူတို့က (၇)ရာစုကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားတွေထုတ်ပေးစဉ်က ကျောက်နီမော် ရွာသားတွေကို ရခိုင်လူမျိုး၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအဖြစ် မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဦးနေ၀င်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်မှန်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပဲရှိတယ်၊ ရခိုင်လူမျိုး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီး ကမ္ဘာမှာမရှိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီဥပဒေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁၈၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်ကိုရောက်နေတဲ့ အာရဗ်အနွယ်၊ ပါရှန်းအနွယ်တွေဟာ ကမန်တိုင်းရင်းသား တွေသာဖြစ်တယ်လို့ လ-၀-က ကသတ်မှတ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းထုတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်တွေမှာ ကျောက်နီမော်ရွာသားတွေဟာ ကမန်တွေအဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရတယ်။ ဒါဟာ တကယ်တော့ လ-၀-က ရဲ့အမှားလို့လည်း မဆိုနိုင်ဘူး။ ""ရခိုင်အစ္စလာမ်ဆိုတာ မရှိဘူး"" လို့ ဇွတ်ငြင်းနေတဲ့လူတွေမှာသာ တာဝန်ရှိတာပါ။
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မပြောလိုပေမဲ့ ဆက်စပ်လို့ရအောင် သမိုင်းမှတ်ချက်တချို့ကို ပြောပြ ချင်တယ်။ ဘိုးတော်ဘုရား ရခိုင်ကိုသိမ်းပြီးနောက် ရမ္မာဝတီ(ရမ်းဗြဲ)ကို အုပ်ချုပ်ဖို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဆရာတော်ကြီးဦးနု (သံတော်ဦးတင်လွှာကျမ်းနဲ့ ဘင်္ဂလားသွားမှတ်တမ်းကို ရေးခဲ့သူ ရွှေတောင်သာဂသူဘွဲ့ရပုဂ်္ဂိုလ်)ကို ပြန်တမ်းနဲ့ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ရမ်းဗြဲကျွန်းမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ပသီများ(ကမန်မဟုတ်)ဟာ အာဗျစ်သဟိုသိန်္နီသခင်ကြီးနဲ့ လက်ထောက်တပည့်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘာသာရေးအရ လက်ခံလိုက်နာရမယ်လို့လည်း တရားဝင်ပြန်တမ်း ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် ရမ်းဗြဲကျွန်းမှာ ရခိုင်မွတ်စလင်မ်တွေ အဲဒီအချိန်မှာရှိနှင့်ပြီး ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာက ပုဂံခေတ် အလောင်းစည်သူမင်းရဲ့သားတော် နရသူကို ဝေသာလီကုလားတွေက လုပ်ကြံလို့ကျဆုံးခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကို ကုလားကျမင်းလို့ မှတ်တမ်းတင် ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဝေသာလီဟာ ရခိုင်မဟုတ်ဘူး၊ ကုလားတွေဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။ အဲဒီခေတ် ရခိုင်မှာရှိတဲ့ ဝေသာလီဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာလည်း ကုလား ပဲ။ ဟိန္ဒူဝေသာလီတွေလည်း ကုလား ပဲ။ အဲဒီဝေသာလီတွေပြောတဲ့ အင်ဒိုအာရိယန်စကားကို သက်၊ ဒိုင်းနက်၊ မရမာကြီးအားလုံး ပြောကြတယ်။ ဒီစကားကိုပဲ ကျောက်နီမော်၊ မြေပုံ၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦး၊ မြောင်းဗွေ၊ မင်းပြား စတဲ့ဒေသတွေက တံငါဇာတ်ဝင်တွေ၊ လယ်သမားဇာတ်ဝင်တွေ၊ ကုန်သည်ဇာတ်ဝင် တွေအားလုံး ဒီစကားပဲပြောကြတယ်။ အထက်ပိုင်းကိုရောက်ရင် နည်းနည်းပဲကွဲသွားတယ်။ အခု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ စစ်တကောင်းတောင်တန်းတွေမှာလည်း ဒီလူမျိုးတွေ အားလုံးရှိတယ်။ ဒီစကားမျိုးကိုပဲ ပြောကြတယ်။ ဒီတော့ စကားတစ်ခုတည်းကို ပြောတာချင်း အတူတူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကုလားတွေကိုတော့ တိုင်းရင်းသားစာရင်းမှာ သွင်းပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေကျမှ ဘင်္ဂါလီလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျ မကျ၊ ဒီနေ့ ကမ္ဘာက လက်ခံထားတဲ့ စံပေတံတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စေ့စေ့တွေးကြည့်စေချင်တယ်။
အဲဒီလို သမိုင်းကြောင်းရဲ့ ဖြစ်ရပ်အမှန်တွေကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့၊ ဆရာမကြီးဒေါ်ကြန်တို့ကို ယုတ်ယုတ်မာမာ ဆဲရေးတိုင်းထွာရှုတ်ချပြီး နဂါးတွေ၊ ဂဠုန်တွေ၊ ဘီလူးတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တွေကိုတော့ သမိုင်းပါလို့ ဇွတ်အတင်းပြောပြီး လူအုပ်စုတစ်စုကို ၀ိုင်းပြီးဖိနှိပ်နေတဲ့ လူတွေကို ဒီမိုကရေစီသမားတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေလို့ ယုံကြည်ရမှာလား။ ဗမာနဲ့ ရခိုင်ဆိုတာ ""ကြက်""နဲ့""ကရက်"" လောက်ပဲကွာတာကို ရခိုင်ကျတော့ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ ပြည်နယ်တစ်နယ်၊ ထီးတစ်စင်း၊ ဓားတစ်လက် တောင်းနေပြီး ဘင်္ဂါလီနဲ့ ၅၀% လောက် စကားလုံးမတူတဲ့ ဝေသာလီနွယ်တွေ ကိုတော့ စကားတူ တယ်၊ ရုပ်ဆင်တယ်လို့ ကျားကျားမီးယပ် ဘင်္ဂါလီလုပ်နေတာကို ကမ္ဘာကတော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။
အခုရှိနေတဲ့ ရခိုင်ဆိုတာ A.D(၉)ရာစုမှာမှ ၀င်လာတဲ့ တိဘက်တိုဘာမင် (မွန်ဂိုလွိုက်) တွေက ဟိန္ဒူဝေသာလီသမိုင်းကို ၀င်ကစွပ်လုပ်ပြီး ဗမာ့သမိုင်းထက် ရှေးကျသလိုလို၊ ဗမာထက် အရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သလိုလို သမိုင်းအတုနဲ့ လှည့်စားတာကို ကမ္ဘာ့အရှေ့ဖျားသမိုင်း၊ အိန်္ဒိယ သမိုင်း၊ အနောက်နိုင်ငံသမိုင်း၊ အာရဗ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် အမှန်တရားကို သိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင်တွေထဲက အမှန်တရားဖော်ထုတ်သူတွေကလည်း လက်ခံ ကြပါတယ်။ ဒီပညာရှင်တွကိုကျတော့ ကလော်ဆဲနေကြတာဟာလည်း လူယဉ်ကျေးတွေရဲ့စရိုက်တော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ရခိုင်လူမျိုးထဲက သမိုင်းပညာရှင်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာအေးချမ်းကတော့ ဝေသာလီခေတ်နဲ့ လေးမျိုးခေတ် အကူးအပြောင်းကာလတွင် ရခိုင်၌ အလွန်ကြီးမားသော နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ရှိမည်-လို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ရေးပေမယ့် ဒါဟာ A.D ၉၅၇ မှာ မွန်ဂိုလီယံတွေ ဝေသာလီကိုသိမ်း၊ ထီးနန်းအသစ်တည်ပြီး အင်ဒို-မွန်ဂို (လက်ရှိရခိုင်) လူမျိုးသစ်ပေါ်ပေါက်လာတာကို ဖုံးတစ်ဝက် ဖော်တစ်ဝက် ၀န်ခံတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအနေနဲ့ တခြားလူမျိုးရေးကိစ္စတွေကို မပြောချင်ပေမယ့် သမိုင်းချင်းကဆက်နေလို့ ပြောရတာပါ။ ဦး အဓိကရေးချင်တာက ကျောက်နီမော်ကိစ္စ၊ အဲဒီဒေသခံ ဝေသာလီတွေထဲက မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယားတချို့ကို အခုစာနဲ့အတူ ပူးတွဲပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မဆလခေတ် နှောင်းပိုင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းအာဏာရှိသူတချို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ၀င်လာသူတွေ ပါဝင်တယ်။ သူတို့ကတစ်ဆင့် မကင်းရာမကင်းကြောင်း လူတွေကိုလည်း တသောသောနဲ့ ခေါ်သွင်းခဲ့တယ်။ အခု ဦးတင်ပြတဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယားမျိုးကို အဲဒီလူတွေပြရဲပါ့မလား။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အသံကောင်းဟစ်နေကြတဲ့ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေရော လွတ်ကြ ရဲ့လား။ ရခိုင်မှာလူဝင်မှုကိုစစ်ရင် ဘက်မလိုက်စတမ်း စစ်ကြည့်စမ်းပါ။ မဆလခေတ်မှာ ရခိုင်မှာ အာဏာရှိပြီး အခွင့်ထူးရနေတာက အ၀ကျွန်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက၀င်လာတဲ့ ""မောက်"" ရခိုင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ""ခရိုနီ""တွေပါ။ အခြားတစ်ဖက်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက အနေကြပ်၊ အသေကြပ်နဲ့ ပြားပြားဝပ်နေကြရတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုစွန့်ပြီး ဘယ်ကုလားမှ ရခိုင်ကို ၀င်မလာဘူး။ သူတို့ထက် ပိုပြီးချမ်းသာတဲ့ ဆော်ဒီ၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပဲ သွားကြမှာပေါ့။ တကယ်ဝင်နေတာက ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် နိုင်ငံသားလက်မှတ်အပါအ၀င် မြေ၊ ရာထူး၊ ငွေကြေး၊ မိန်းမ ဘာမဆို အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ စစ်တကောင်းရခိုင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ အခုဆိုရင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ လ၀က၀န်ကြီးတို့ အဖြေမှန်ကိုသိသွားပြီ။ အခု နောက်ပိုင်း လ၀က၀န်ကြီး ပြောတာတွေဟာ ကွက်တိမှန်ပါတယ်။
လက်ရှိ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာလည်း ရခိုင်မျိုးချစ်ဆိုသူတချို့က ""ရခိုင်ပြည်သည် ရခိုင်သားများအတွက်""ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကင်းပြီး လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တဲ့ ကြွေးကြော်သံနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ချောက်ကမ်းပါးထဲကို ဆွဲခေါ်သွားနေတာကို ငါ့တူတို့ မမြင်ကြတာ ဦး အံ့သြလို့မဆုံးဘူး။ ဒီစကားတွေကိုခြုံပြီးပြောနေရတာက ဦး ပြောချင်တဲ့ ကျောက်နီမော်ရွာအကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေလို့ပါ။
ကမန်က အီရန်၊ အိန်္ဒိယ၊ မဂို အနွယ်ဖြစ်တယ်။ ကျောက်နီမော်သားက အာရဗ်အနွယ် ဖြစ်တယ်။ ဘာများ ပိုပြီးထူးခြားလို့လဲ။ ရခိုင်စကားကို ရခိုင်ကို ပြန်သင်ပေးရလောက်အောင် ပြောနိုင်တယ်။ ဒီတော့ လ၀ကလုပ်တာ မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကမန်နဲ့မပေးချင်ရင် ဝေသာလီမွတ်စလင်မ် ဒါမှမဟုတ် ဘိုးတော်ဘုရားပြန်တမ်းမှာ သတ်မှတ်သလို ပသီ အစ္စလာမ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပေါ့။ ပြောချင်တာက အဲဒီကျောက်နီမော်သားတွေဟာ ရခိုင်နဲ့ကမန်ထက် ပိုပြီး စောတဲ့ ရှေးဦးဝေသာလီပြည်သား ရခိုင်တွေဆိုတာပါပဲ။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးတယ်၊ ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျီဒါမှမဟုတ် တိုက်ပုံအင်္ကျီဝတ်တယ်။ ယောက်ျားတွေက ပုဆိုးရှည်နဲ့ မိန်းမတွေ က ပတ်ထဘီဝတ်ကြတယ်။ အင်္ကျီရှည်တွေ "ဆာရီ"တွေ ဘယ်တုန်းကမှ မ၀တ်ဘူး။ ဆရာ သိန်းဖေမြင့်ရဲ့ စစ်အတွင်းခရီးသည်စာအုပ် "မြို့ဟောင်းမှ ပလက်ဝသို့" အခန်းမှာပါတဲ့ "ဒို့ရခိုင် ၀တ်စုံ"ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ၀တ်စုံပဲ။ ဒါကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ကျားကျားမီးယပ် ဘင်္ဂါလီဇာတ်သွင်း နေတာဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းပါ Artical (၁၅) နဲ့ ညီရဲ့လား။ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို အဓမ္မနည်းနဲ့ နှိပ်ကွပ်တာဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ နာဇီ ဟစ်တလာ၊ စပိန်အာဏာရှင် ဖရန်ကို၊ အီတလီက မူဆိုလီနီနဲ့ ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ ယူဂိုဆလပ်က ရာဒိုဗန် ကာရာဇစ်တို့၊ မီလိုစီဗစ်တို့လိုလူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးတွေပါ။ ကျောက်နီမော်က တောင်ပိုင်းသား တချို့ ၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်မှုမှာ ကုလားပုံပေါက်နေတာက ဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့ မမှန်မကန် ပညာပေးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီလို အိန်္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကို အထင်ကြီးသူတွေဟာ ရန်ကုန်နဲ့ အခြားနေရာက မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေထဲမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့် အချိန်ယူ ပညာပေးပြီး ပပျောက်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့။ အခုဆိုရင် သမ္မတပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာလည်း ဒီကိစ္စတွေပါလာပြီဖြစ်လို့ မွတ်စလင်မ်တွေဘက်က ဆင်ခြင်ရမဲ့အပိုင်းပါ။
ကျောက်နီမော်ရွာမှာ လက်ရှိ ရပ်ကွက်(၁၁)ခု၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၁၀၆၂)စု၊ လူဦးရေ (၅၈၂၈)ဦး ရှိတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်အတွင်းမှာ ပြင်ပကဆိုလို့ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တစ်ဦးသာ ၀င်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီလူဟာ တရားဝင် နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် နေထိုင် ခဲ့တယ်။ သူရဲ့မျိုးဆက်တောင် အခုအခါ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်နေကြပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကျောက်နီမော်ရွာကိုပဲ ခိုးဝင်တဲ့လူရှိသလိုလို၊ ပိုက်လှေတွေနဲ့ လူမှောင်ခိုသွင်းသလိုလို ပြောတော့ ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ ကျောက်နီမော်တစ်ရွာလုံးကို စစ်ရင်တောင် ဘင်္ဂလားနွယ်တစ်ယောက် မှမရှိဘူးဆိုတာ ဦး အသက်ကိုလောင်းကြေးထပ်ပြီး ပြောရဲတယ်။ ဒါ ဒီနေ့သွားပြီး နောက်နေ့ ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်ကနေ ဒီနေ့ထိ အခေါက်ခေါက်အခါခါ သွားဖူးလို့ ပြောနေတာပါ။ ငါ့လျှာစောင်းထက်တယ်ဆိုပြီး အကုန်လုံးကိုသိတဲ့ပုံနဲ့ လေဖမ်းဒါန်းစီး သမိုင်း ကို အဓမ္မကျင့်သလို မပြောကောင်းပါဘူး။ အပြောခံရသူတွေဘ၀နဲ့ရင်းပြီး နစ်နာရတယ်။ အခုအချိန်မှာ ငါ့တူတို့က လူထုမျက်နှာစာရှေ့ကိုရောက်နေပြီး မီဒီယာပေါင်းစုံကလည်း စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ ငါ့တူတို့လို လူတွေရဲ့ ပြောစကားတစ်ခွန်းဟာ ပြည်သူများစွာရဲ့ ဘ၀တွေအပေါ် ထင်ဟပ်စေတယ်ဆိုတာကို နှလုံးသွင်းပြီး ဆင်ခြင်စေချင်တယ်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က နောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲလို့ VOA နဲ့အင်တာဗျူးမှာ ပြောပြီးတဲ့နောက်မှ ငါ့တူက ""ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ""လို့ ပြောခဲ့တယ် ဆိုတော့ စောစောစီးစီးက ပြောရင် တန်ဖိုးရှိမဲ့စကားကို သမ္မတပြောပြီးမှ လိုက်ပြောတဲ့ ငါ့တူရဲ့ နောက်မြီးဆွဲစကားက ဦးသိတဲ့ ကိုကိုကြီး မဟုတ်သလိုဘဲ။
လူဝင်မှုအကြောင်း တကယ်ပြောရင် ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်း တံခါးမရှိ ဓားမရှိ ၀င်လာ ကြီးစိုးနေတဲ့ အ၀ကျွန်းသား ဘင်္ဂါလီရခိုင်တွေကို အဓိက စစ်စေချင်တယ်။ ဟိုဘက်ကမ်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရခိုင်တွေ သန်းနဲ့ချီပြီး ရှိသလို ဒိုင်းနက်၊ သက်၊ မြို ခေါ် ခမွီး၊ မရမာကြီး (ဘရူးဝါး)ဆိုတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ထဲက အမျိုးသမီးဝန်ကြီးတစ်ဦးအပါအ၀င် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရထဲမှာ ၀န်ကြီး(၃)ဦး ရှိတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စစ်တပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးဟာ ရခိုင်ဖြစ်တယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ်ပင်လျှင် ဒိုင်းနက်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ ဒီဘက် ရခိုင်ဘက်မှာ အာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ သူတွေကလည်း ရခိုင်ပဲဆိုတော့ သူတို့သွင်းချင်တဲ့လူကို သွင်းပြီး သူတို့ပေးချင်တဲ့ ရာထူးနေရာတွေ ပေးနေတာပဲ။ လက်ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ရာထူးကြီးကြီးတွေမှာလည်း အ၀ကျွန်းသား ကုလားရခိုင်တွေ ရှိနေပါတယ်။ သိချင်ရင်တော့ ဖော်ထုတ်ပေးမဲ့သူတွေ ရှိတယ်။
ဗမာဘုရင်ဘိုးတော်ဘုရားက ရခိုင်ကိုသိမ်းခဲ့လို့ လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံးရပါတယ်လို့ ခံယူထားတွေ၊ ရှေ့တင်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းကို ပျားရည်သုတ် မျက်နှာချိုသွေးပြီး နောက်ကွယ်မှာ ""အောက်သား ဗမာတွေ""လို့ ပြောပြီး ဆဲနေသူတွေ၊ အားမရှိတုန်းမှာ ခေါင်းငုံ့နေပေမဲ့ အားရှိ လာရင် ကမ္ဗောဇသာဒီနန်းတော်ကို မီးရှို့ပြီး သန်လျင်ကို ပေါ်တူဂီငဇင်ကာလက် ၀ကွက်အပ်ခဲ့တဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ် ဖက်ဆစ်လက်သစ်တွေကို သတိထားပါ ငါ့တူ-
(အကျယ်ကိုသိလိုပါလျှင် ဦးကျော်မင်း (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း)ရေး ""ရခိုင်ပြည်၏ တိမ်မြုပ်နေသောသမိုင်းအခန်းကဏ္ဍ တစေ့တစောင်း"" စာအုပ်နှင့် အင်တာနက်ဆောင်းပါးများ တွင် လေ့လာပါ။)
Posted: 06 Sep 2012 11:32 PM PDT
"Kami mengambil masa lebih tiga jam untuk memecahkan tandas itu perlahan-lahan. Kami bergilir-gilir melakukannya. Ketika itu juga hati saya bercampur baur antara sedih dan geram dengan manusia yang membuang bayi itu," katanya. -HM
Posted: 06 Sep 2012 11:44 PM PDT
Tarikh: 8-9 September 2012Masa: 9pagi-12petangTempat: Dewan MBPJ Sungai Way, SS 9A,Jalan SS9A/1, Sungai Way 46300 Petaling Jaya.(Di depan Pasar Seri Setia)新选民登记：2012年9月8日新选民登记和更换选举地址：2012年9月9日时间：早上九点至中午十二点地点：双溪威新村八打灵再也市政厅礼堂（Seri Setia巴刹对面）（八打灵再也7日讯）雪州甘榜东姑区州议员刘永山将在9月8日（星期六）和9月9日（星期日）早上9点到中午12点假双溪威新村村委会礼堂举办选民登记运动，欢迎村民和其他地区尚未登记成为选民的马来西亚公民前来登记。另外，雪州选举委员会也将在9月9日（星期日）当天前来双溪威新村礼堂处理更换投票地点的申请。对此，
Posted: 06 Sep 2012 08:35 PM PDT
Source: ကျွန်တော်သာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် (၁) M-Media
၁။ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု ရှိနေသော ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ၊
မဆလ နောက်ဆုံး သမ္မတ ဒေါက်တာမောင်မောင် ရေးသားသော စာအုပ်တွင် ဒီမိုကရေစီ အခွင့် အရေးများ ဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောစည်းရုံးခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားမှုတို့သည် အခြား ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ဟူသောဘောင်ကို မကျော်ရပါဟု ဥပမာ ပေးကာ ရေးသားထားပါသည်။
ဥပမာ။ ။ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံရှိ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းရှေ့ နွားခေါင်းပြတ်တစ်ခု ချထားကာ ဆန္ဒပြခဲ့သော အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်များကို အစိုးရက ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခဲ့ဘူးပါသည်။
ထို့အတူ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ဘာသာတစ်ခု၏ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်သည် အခြားဘာသာတစ်ခု၏ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ကို မထိပါးစေသင့်ပါ။ အပြန်အလှန် လေးစားကြရပါမည်။
ယခုအခါ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတကြီး၏ ရပ်တည်ချက်ကို ထောက်ခံပွဲဟု အကြောင်းပြကာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ဟူသော ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများ သာမက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခန်း (၈) ပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများ ပုဒ်မ ၃၄၇၊ ၃၄၈၊ ၃၅၃၊ ၃၅၅၊ ၃၆၂၊ ၃၆၃ နှင့် ပုဒ်မ ၃၆၄ ကို ချိုးဖေါက်ကာ ဟောပြော စည်းရုံးမှုများ မန္တလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တစ်ခု၏ သမ္မတ တစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး (Democracy Rights) များ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းနေမှုများနှင့် ဒီမိုကရေစီစံနစ်၏ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် (Dos & Don'ts) များကို နိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့် အများပြည်သူအား မီဒီယာများမှ တဆင့် ပညာပေး ဟောပြော စည်းရုံးပါမည်။ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျ ပြုမူတတ်အောင် လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးပါမည်။
သို့သော် ဆက်လက်၍ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်နေပါက စံပြ ပညာပေးအဖြစ် ကျူးလွန်သူများကို ရုံးတင် တရားဆွဲဆို၊ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးနောက် သမ္မတ၏ အခွင့်အာဏာကို ကျင့်သုံးကာ ပထမနှင့် နောက်ဆုံး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးလိုက်ပါမည်။
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်း (အခန်း ၁၂) နှင့် ကျွန်ုပ်၏ အမြင်
(က) လိုအပ်ပါက အစိုးရအနေဖြင့် လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်နေသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ခု (သို့မဟုတ်) အချို့ကို ပြောင်းလဲရေးဆွဲရန် အဆိုကို ပြည်ထောင်စု လွတ်တော်သို့ တိုက်ရိုက် တင်သွင်းပြီး မဲခွဲခွင့်ရရန်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့မှ အရေးပေါ်လိုအပ်နေသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဥပဒေမူကြမ်းများကို ပြည်ထောင်စု လွတ်တော်သို့ တိုက်ရိုက် တင်သွင်းပြီး မဲခွဲ၊ အတည်ပြု ခွင့်ရရန် ကြိုးစားပါမည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အစိုးရ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တိုးချဲ့ရပါမည်။
ဥပမာ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀% ၏ ထောက်ခံချက်မလိုဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန် အချက်အလက်များ (သို့မဟုတ်) ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေမူကြမ်းများကို အစိုးတစ်ရပ်မှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တိုက်ရိုက် တင်သွင်းပြီး မဲခွဲ အတည်ပြု ခွင့်ရရန် ကြိုးစားပါမည်။
(ခ) တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် လူများစုကိုယ်စားလှယ်မှ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လျှင် အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်း (Counter check & balance) နိုင်ရန် လူနည်းစုကို်ယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် လူဦးရေ အချိုးအစားအရ လူနည်းစု အရပ်သား ရပ်မိရပ်ဖ အချို့ကို အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးအဖြစ် မဖြစ်မနေ ထဲ့သွင်းနိုင်အောင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးစားပါမည်။
ဥပမာ။ ။ ရခိုင်လူမျိုး ဦးလှမောင်တင် ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဘင်္ဂါံလီ မွတ်ဆလင် ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးစ နှစ်ဦးစ ဝန်ကြီးအဖြစ် ပါဝင်မည်ဆိုလျှင် ယ္ခုလို အရုပ်ဆိုးအကြည်းတန်မှုများ လှပသော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နောက်ထပ် ဖြစ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။
၃။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ၏ တိုက်တွန်းမူကို မျှော်လင့်ပါသည်၊
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များသည် လူနည်းစုအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ခြင်း၊ တောင်းဆိုပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါက ရွေးကောက်ပွဲများတွင် လူများစု၏ ထောက်ခံမဲများ ဆုံးရှုံးမှာကို တွေးပြီး ပူလေ့ ရှိကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် မန္တလေးဆန္ဒုပြပွဲများတွင် မြန်မာပြည်မှအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို နှင်ထုတ်ရန် ဟောပြော နေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးများသာမက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပါ ချိုးဖေါက်ခြင်းဖြစ်၍ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်ရန် အကြောင်းရှိပါသဖြင့် သမ္မတကြီး အနေဖြင့် အမြန်ဆုံး ဟန့်တား၊ အရေးယူသင့်ကြောင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီ ၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို ကျွန်ုပ် သမ္မတကြီး အနေဖြင့် လိုလားစွာ မျှော်လင့် တောင်းတ နေပါသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေး ပုဒ်မ (၃၅၅)
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း မည်သည့်အရပ်ဒေသ၌မဆို ဥပဒေနှင့်အညီ အခြေစိုက်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေး ပုဒ်မ (၃၆၂)
နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သော ဘာသာတို့ကို ဤဖွဲ့စည်းပုံ အာဏာတည်သောနေ့၌ နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေး ပုဒ်မ (၃၆၄)
နိုင်ငံရေးကိစ္စအလို့ငှာ ဘာသာ၊ သာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့အပြင် လူမျိုးရေးကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်လည်းကောင်း၊ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန် ကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ် ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် တည်ဆဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေအရ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖြစ်ပင် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် မရှိသော၊ မြန်မာစစ်စစ် မိခင်မှ မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် မွေးဖွားသည့် မဲပေးခွင့် သာရပြီး ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့် မရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ စစ်မှုထမ်းမှုဥပဒေအရ စစ်မှုထမ်းရန် တာဝန်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted: 06 Sep 2012 08:38 PM PDT
"Saya dimaklumkan Abd Rahim akan menunaikan ibadah haji pada pertengahan bulan ini, tetapi hasratnya tidak kesampaian.
"Kedua-dua mangsa juga difahamkan baru pulang daripada majlis sempena meraikan bakal haji di samping Sambutan Aidilfitri dekat Felda Lurah Bilut," katanya.
"Kami benar-benar kehilangan. Setiap ilmu serta pengalaman ketika bersamanya akan menjadi bekalan meneruskan amanah.
"Diharapkan roh kedua-dua ketua berdedikasi ini mendapat rahmat ALLAH dan bersama golongan mukmin," katanya.
"Saya ada memeriksa jadual dan mengesahkan terdapat program pada hari ini (semalam), lalu menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) untuk memaklumkannya.
"Selalunya dia akan balas SMS saya walaupun pada sebelah malam, tetapi tidak pada malam tadi (kelmarin). Dia hanya senyap sehingga saya mendapat tahu mengenai kemalangan menimpanya," katanya.
Turut hadir memberi penghormatan terakhir, Pengurus Besar Felda Wilayah Mempaga, Jahya Janal; Timbalan Pengurus Besar Felda Wilayah Mempaga, Amir Hamdan Yusof dan Ketua Pergerakan Wanita Umno Bahagian, Jariah Hashim. -SH
Posted: 06 Sep 2012 09:57 PM PDT
Posted: 06 Sep 2012 06:31 PM PDT
Saham Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGVH) mengalami kejatuhan yang amat parah apabila setelah jatuh di bawah paras psikologi RM5 kelmarin dan semalam jatuh lagi apabila ditutup pada harga RM4.78.
Harga tersebut hanya 0.8 sen lagi ke paras bahaya - menurut penganalisa jika turun ke RM4.70 seunit, peneroka akan menangung kerugian.
Koordinator Gerakan Selamatkan Felda, Sdra Mazlan Aliman di dalam kenyataannya menyatakan:
"Adakah Najib akan kata, turun naik saham perkara biasa. Hujah yang sama diberikan oleh Dato Abd Ghani Othman, Menteri Besar Johor waktu lingkupnya Amanah Saham Johor. Pemimpin Umno tak fikir derita rakyat. Berapa ramai pemegang saham ASJ yang muflis kerana ghairah beli saham ASJ sebab percaya sangat cakap Ghani Othman. Hingga buat loan di Bank mencecah RM 100,000.
Bila pelabur yg merana, buat loan, jual tanah dll nak untung segera jumpa pemimpin Umno; ayatnya standard... adat main saham, ada untung ada rugi!"
Bila pelabur yg merana, buat loan, jual tanah dll nak untung segera jumpa pemimpin Umno; ayatnya standard...adat main saham, ada untung ada rugi!
Masa ghairah promote FGVH,...apa yang pemimpin Umno tak jamin?
Jangan dengar cakap pembangkang, tak de wawasan, bodoh, ......
Kini bukan sahaja saham FGVH jatuh, isu syarikat judi beli saham seperti saya paparkan dalam FB pun, PM dan Isa Samad terkedu. Sudah tidak mampu menjaminnya. Peneroka dan pemegang saham tidak kira Ustaz, Imam, Bilal dan lain2 terpalit sama. Menanggung dosa!
Bukan sikit, 400 juta unit saham Genting Bhd dalam FGVH....
Mewakili ANAK, saya mendesak YAB PM buat penjelasan segera kedudukan meruncing saham FGVH; juga kedudukan sebenar mekanisme syariah bagi mengelakkan pemegang saham terjebak dlm pelaburan haram atau syubhat.
Gerakan Selamatkan Felda(GSF) akan mengutus surat Ke Bawah Duli Tuanku Yang DiPertuan Agong mohon pemakluman mengenai status memorandum yg dihantar pada Himpunan Oren 14 Julai lalu. Keyakinan kami Yang DiPertuan Agong dan Majlis Raja Raja Melayu sedang meneliti perkembangan terkini mengenai FGVH.
GSF sedang berusaha mendapat perkenan untuk mengadap Yang DiPertuan Agong bagi berkongsi kebimbangan seluruh rakyat Malaysia.
Posted: 06 Sep 2012 03:30 PM PDT
My message to you today: Time passes. Life happens. Distance separates. Children grow up. Jobs come and go. Love waxes and wanes. Men don't do what they're supposed to do. Hearts break. Parents die. Colleagues forget favors. Careers end.
BUT…. Sisters are there, no matter how much time and how many miles are between you. A girl friend is never farther away than needing her can reach. When you have to walk that lonesome valley and you have to walk it by yourself, the women in your life will be on the valley's rim, cheering you on and praying for you, pulling for you, intervening on your behalf, and waiting with open arms at the valley's end.
The world wouldn't be the same without women, and neither would I. When we began this adventure called womanhood, we had no idea of the incredible joys or sorrows that lay ahead. Nor did we know how much we would need each other. Every day, we need each other still. Let us celebrate all the women who help make our lives meaningful!